Imperial County, CA • Body Mass sy NuRu Massage
Manontany tena ve isika hoe ahoana no nahitan'izy ireo ny fikosoham-batana sy ny fanorana Nuru tao Imperial County, CA tamin'izany fotoana izany?
Imperial County dia faritany iray ao amin'ny fanjakan'i Etazonia, Kalifornia. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 174,528 ny isam-ponina. Ny sezan'ny distrika dia El Centro. Niorina tamin'ny taona 1907 avy amin'ny fizarazaran'i San Diego County, io no faritany farany niforona tany Kalifornia. Manontany tena ve isika hoe ahoana no nahitan'izy ireo fikosoham-batana sy fanorana Nuru any Imperial County, CA amin'ireny fotoana ireny?